ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ပြတိုက်ကိုအခမဲ့ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ကျေးဇူးကန်းခြင်းခံခဲ့ရသူ – Myanmar
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ပြတိုက်ကိုအခမဲ့ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ကျေးဇူးကန်းခြင်းခံခဲ့ရသူ
January 23, 2021 admin Life Style 0
မလေးရှားနိုင်ငံက ” Rumahku Muziumku ” အမည်ရှိတဲ့ ပြတိုက်အငယ်လေးကို ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အသက် 81 နှစ်အရွယ် Nordin Ali ဆိုသည့်အဘိုးအိုအတွက်ကတော့ အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဘိုးအိုဟာသူ၏ပြတိုက်ရှိရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို အခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးထားပေမဲ့လည်း
ယခုအချိန်မှတော့အချို့သော မသမာသူများက ပြတိုက်ရှိရှေးဟောင်ပစ္စည်းများကို ခိုးယူခဲ့တဲ့အတွက် ကြာလာတော့ မသက်နိုင်တော့တဲ့အဆုံး ပြတိုက်ငယ်လေးကိုပိတ်ပစ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ Nordin Ali နှင့် သူ၏ဇနီးဖြစ်သူ Maznah အသက် 60 တို့ဟာ ၎င်းတို့၏ပြတိုက်ကိုကြီးကြပ်ဖို့ အတော်လေးကိုအသက်ကြီးနေပြီဖြစ်သည့်အပြင် ကျန်မာရေးအခြေအနေကလည်း အရင်ချိန်ကကဲ့သို့မကောင်းမွန်တော့တဲ့အတွက် သူခိုးတွေအတွက်ကတော့ ပစ္စည်းခိုးယူဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူစေခဲ့ပါတယ် ။
MELAKA 30 AUGUST 2016. ( MB264P / Antik ) Katil Baba Noyonya antara koleksi barangan antik yang ditempatkan di rumah warga emas, Nordin Ali, 78, yang dipangil `Rumahku Muziumku’ Kampung Padang Temu, Melaka. STR/NAZRI ABU BAKAR
မ ယား ငယ် လ င်င ယ် ဆို တာ လည်း အများသုံး သန့်စင်ခန်းလို ပါပဲ..။